အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၀၈ ထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ..။
တိမ်မည်းရဲ့.. Bitcoin ဘာလဲ၊ဘယ်လဲ။
ဒုတိယမြန်မာ-အမေရိကန်မျိုးဆက်.. Myint ရဲ့ ခေတ်စမ်းလုလင်
မောင်လူပေရေးတဲ့.. ချိုင်းနိစ်နှစ်သစ် ၂၀၁၈၊ ခွေးနှစ်အကြောင်း ဟောစာ..ပြောစာ
ဖေဖော်ဝါရီအလှပန်းအဖြစ်.. မြန်မာပြည်က.. MieMie Ko
မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့) ရဲ့.. ပင်ပန်းခြင်းရောဂါများ
ကေဇီရဲ့.. နှပ်ပြီးစားမည် ပီအိုင်ဂျီ
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့.. ရွှေမန်းသားစာရေးဆရာကြီး မြမျိုးလွင်
ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်.. ဗေဒင်..။ အမေရိကားက.. အာမခံအကြောင်းတွေ..၊ ဓာတ်ပုံအက်ဆေးတွေနဲ့.. မြန်မာ့ဂဇက်..ထွက်နေပါပြီ..။
ဘဲဖင်ကောက်လေး မဟုတ်တော့ပုကို း…. အော်….
ဒီမှာ ဒေါင်းလို့ရတဲ့လင့်လေး တစ်ခါထဲ ထည့်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်နော်သဂျီး
မြန်မာကတော့ ဘယ်လိုကန်ထုတ်ရမလဲ စဉ်း… စား..နေ…ဆဲ..။